२० रूपैयाँको जगमा! :: विजय कुमार :: Setopati
२० रूपैयाँको जगमा!
पाँच पाँच रूपयाँका चार वटा नोट रहेछन्। कच्याककुचुक पारेर बेरिएका। हेर्दै माया लाग्ने। मैले बैंकमा जम्मा गर्न सकिनँ। चिनो सम्झेर आफैंसँग राखेँ। त्यसको बदला आफूसँग भएका दस दसका दुई नोट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा जम्मा गरिदिएँ, ७ जुन २०१५ मा।
भूकम्पले आफ्नो घरबार, अन्नपात गुमाएकी, मानेखर्क गाउँकी श्रीमती फूलमती बिकले दिएको यही २० रूपैयाँको जगमा ‘कोशिश, गरे पछि हुन्छ’ अभियानको विधिवत सुरुवात भएको हो।
२७ जुलाई २०१५ सम्मको बैंक विवरण अनुसार- धुलिखेल अस्पतालको सामुदायिक विकाश कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरिको ‘कोशिश’ अभियानको खातामा ४१,७७,९६८.९५ (एकचालिस लाख सतहत्तर हजार अड्तिस रुपैयाँ पन्चान्बे पैसा) जम्मा भएको छ।
यो सबै रकम देश विदेशमा रहेका सर्वसाधारणहरुको उदारताबाट जुटेको हो। थोपा थोपा मिलेर बनेको हो। थोपामाथि थोपा थपिने क्रम अझै जारी छ।
‘मानिसको उद्देश्य पवित्र छ भने, परमात्माका सहयोगी हातहरू आफ से आफ उत्पन्न हुन्छन्’ भन्ने युगौ पुरानो वचनको गरिमा मेरा निम्ति फेरि एक पटक नयाँ भएर चम्किएको छ।
धुलिखेल अस्पतालको ‘कोशिश, गरे पछि सकिन्छ’ अभियानका तर्फबाट हामी हाम्रा सबै दाताहरुप्रति आभारी छौं। आभारी मात्र छैनौ, तपाईँहरूले दिएको प्रत्येक रूपैयाँलाई सृजनात्मक जिम्मेवारीका साथ खर्च गर्न कृत संकल्पित पनि छौं।
हामीलाई बोध छ- सहयोग आर्थिक मात्र हुँदैन, त्यसैले, हामी कोशिश अभियानप्रति शुभेच्छा र सदभाव प्रकट गर्ने समस्तजनलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौ।
म खासै परोपकारी भाव भएको मानिस थिइनँ र अझै पनि होइन। आफ्नै काममा व्यस्त सामान्य गृहस्थ हुँ। भूइँचालो आएपछि, आफू र आफ्नो परिवारकै सुरक्षामा बढी केन्द्रीत थिएँ। नियतिले डोहोर्‍याएर मलाई जबरजस्ती यो मोडमा ल्याइदिएको मात्र हो।
नियतिको कुरो गर्दा- ठूलो भूइँचालोको दुई दिनपछि, आनन्द संघको फुलहारी गुम्बाका तेन्जिङ दोर्जे लामासँग गरेको टेलिफोन सम्झन्छु।
‘विजय दाइ, हामीले तीन ट्रक उद्धार सामाग्री जुटाएको छौं। त्रिपाल र खाद्यान्न सामाग्री। यसलाई काठमाडौं र पाटन तिर लगेर बाडौं न। तपाई साथी गर्न आइदिनु हुन्थ्यो कि?’
‘हुन्छ आउँछु। तर दिने नै भए अलि टाढाको ठाउँमा दिए बेश हुन्थ्यो कि?’
‘सिन्धुपल्लान्चोक तिर जाऔँ न’
‘हुन्छ विजय दाइ’
यही टेलिफोन सम्वाद मलाई सिन्धुपाल्चोकसम्म पुर्‍यायो। चौतारा र स्याउलेसम्म पुगेर जे जस्तो बरबादी देखेँ, भावविव्हल भएँ। ध्वंशको विराटता त देखेँ नै। तर, त्यति मात्र देखिनँ।
अकल्पनीय नोक्सानीका बाबजुद पनि मानिसले हरेश खाएका थिएनन्। उनीहरू थाकेका थिए, तर हारेका थिएनन्। यही जुझारूपन देखेर आफूलाई पनि केहि गर्ने हौशला मिल्यो। होइन भने, भूकम्पका निरन्तर धक्काले मलाई धेरै भयातुर बनाइदिएको थियो।
यही सिन्धुपाल्चोक यात्राका अनुभूतिले गर्दानै मैले सेतोपाटीमा ‘हामी थाकेका छौ तर हारेका छैनौ’ लेखेँ। पत्रकारको रूपमा, म, आफूले लेखेका, बोलेका कुरा लामो समयसम्म स्मृतिमा राख्दिनँ। ‘वाहवाही’ को आकाश वा आलोचनाको पाताल-दुवैमा धेरै समय अल्झन मन लाग्दैन।
मेरो नजरमा-तत्कालिक महत्वको विधा हो पत्रकारिता। अपवाद बाहेक ‘इन्सट्यान्ट कफी’ जस्तो हो यो- बनायो, खायो र बगायो। लामो समयसम्म स्मृतिमा रहने काम कमै गर्न पाइन्छ यो विधामा। ‘मैले जति पाइला हिँडे, त्यति मेट्दै आएँ...’ भन्ने गीत जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो काम।
यती हुँदाहुँदै पनि हरेक पत्रकारको क्यारियरमा, केहि यस्ता क्षण पनि आउँछन् जो अलि लामो समय स्मृतिमा बस्छन्। ‘हामी थाकेका छौ तर हारेका छैनौ’ मेरो निम्ति त्यस्तै अर्थ राख्ने क्षणहरू मध्ये पर्छ।
लेखेपछि असंख्य प्रतिक्रिया र पत्रहरु आए। म सबैका प्रति विनम्रताका साथ नतमष्तक छु। ‘म कृतज्ञ छु’ भनेर सार्वजनिक रूपले कराइ कराइ म भन्न चाहन्छु।
एउटा भनाइ छ - ‘कुनै मानिस वा कृत्यलाई मन पराउँदा पराउँदै पनि त्यसलाई अभिव्यक्त नगर्नू भनेको - कसैलाई दिन्छु भनेर किनिएको उपहार-लजाएर दिँदै नदिने- गल्ती गरे झै हो।’
जिवनमा मैले त्यस्ता खाले गल्ति धेरै गरे। यस पटक गर्न चाहन्न। म कराइ कराइ भन्न चाहन्छु-‘सहयोग, सदभाव र सदिच्छाका लागि आभारी छु। कृतज्ञ छु।’
म धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक सुत्रधार डा.रामकण्ठ मकाजुप्रति आभारी छु, उहाँले गर्दा नै म भूइँचालोले तहस नहस बनाएको मानेखर्क पुगेँ। भाग्यशाली छु, धुलिखेल अस्पताल जस्तो सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा स्थापित संस्थासँग सहकार्यको मौका पाएँ। पहिला पनि लेखिसके- ‘कोशिस’अभियान धुलिखेल अस्पतालको नेतृत्वमा सञ्चालित छ।
मानेखर्क म दुई पटक पुगेँ। भूइँचालो आएको केहि समयपछि पहिलो पटक, मोटरमा। र, दुई साता अघि वर्षाले गर्दा बाटो बन्द भै सकेकोले-रूझ्दै भिझ्दै, हिड्दै।
पहिलोपटक मानेखर्क पुग्दा म खाली हात गएको थिएँ। त्यो यात्रापछि श्रीमती फूलमति बिकले दिएको २० रूपैयाका विषयमा सेतोपाटीमा जेठ २४ मा ‘कोशिश, गरे पछि हुन्छ’ प्रकाशित भयो। त्यसमा देवकुमार खडकाले थप्नु भएको ५०१ रूपैयाका साथै सुरू भयो ‘कोशिश’ लाई आर्थिक सहयोगका हात बढाउनेहरुको क्रम।
‘कोशिश’ भूकम्पपछि नेपाली समाजमा देखिएको आपसी सहयोग महाअभियानको एउटा सानो प्रतिनिधि बिम्ब मात्र हो। संकटको घडिमा नेपाली समाजमा देखिएको सहनशिलता, सदभाव र सहयोगको महासमुद्रको एक सानो थोपा मात्र हो।
थोपा, बिम्ब र प्रतिक आफैंमा साना हुन्छन्। तर यिनै साना साना सकारात्मक कर्महरुलाई जनसहभागिताको माध्यमबाट फैलाउन सकिए, समाजमा उपलब्धिमुलक परिणाम प्राप्त गरिएका असंख्य उदाहरणहरू हाम्रै देशमा पनि अनादिकालदेखि रहिआएका छन्।
त्यसै क्रममा ‘कोशिस गरेपछि सकिन्छ, हामी गर्छौ, हामी भत्किएका हौ, सकिएका होइनौ’ जस्ता सकारात्मक भावलाई ऊर्जा दिने शतप्रयासको सानो एउटा प्रतिक हो-हाम्रो कोशिश।
1. नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैक, बनेपा शाखामा रहेको धुलिखेल अस्पतालको खातामा सहयोग गर्न चाहनेहरुका निम्ति हामीले सार्वजनिक अपिल गरेका थियौं। नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङले २७ जुलाई २०१५सम्मको विवरण जारी गरेको छ। सोही विवरणको आधारमा दाता नामावली र प्राप्त सहयोग रकम सार्वजनिक गरेको छौं।
2. केहि दाताहरुले स्वेच्छाले आफ्नो नाम मिडियामा प्रकाशित नगर्न मलाई मेरो ईमेल [email protected] मा अनुरोध गर्नुभए बमोजिम उहाँहरूको सहयोग रकम मात्र सार्वजनिक गरिएको छ।
3. CEMET मार्फत २५ जुन २०१५ का दिन जम्मा भएको ८७ हजार १ सय ९९ (सतासी हजार एक सय उनान सय) र JME मार्फत जुलाई १०, २०१५ का दिन जम्मा भएको १ लाख ४ सय ७७ रूपैयाँको हकमा चाहीँ दाताको नाम उपलब्ध छैन। स्वेच्छाले नाम प्रकाशित गर्न नचाहेको अवस्था होइन भने, ती दुई सहयोग रकमको डिपोजिट भौचरको प्रतिलिपिसँगै मलाई [email protected] मा ईमेल गर्न आदरणिय दाताहरूलाई अनुरोध छ।
त्यसै गरि १४ जुन २०१५ मा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको चेक नम्बरहरु क्रमश #२३६२०६ बाट १० हजार रूपैयाँ र चेक #२३६२०७ नम्बरबाट १५ हजार रूपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैङको चेक #69199, बाट जुन ३० २०१५ मा रू.२२ हजार ८५ रूपैयाँ उनन्पचास पैसाको हकमा पनि दाताको नाम नखुलाइएको सम्बन्धमा पनि सोही अनुसार गर्न दाताहरुलाई सादर अनुरोध छ।
4. दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग रकमको कुनै पनि अंश हालसम्म खर्च गरिएको छैन। पहिला पनि लेखिसकियो, आज फेरि दोहोहर्‍याउँन चाहन्छौं - डा.रामण्ठ मकाजु, डा.राजेन्द्र कोजु र म, आफ्नै स्वेच्छाले ‘कोशिश’ अभियानमा संलग्न भएकाले , हामीले यसबापत कुनैपनि प्रकारको पारिश्रमिक लिनेछैनौं। नेपालका लब्ध प्रतिष्ठित चार्टर एकाउन्टेन्टहरूले यो खाताको नियमित परिक्षण गर्नेछन्।
5. ‘कोशिश’ अभियानका निम्ति सहयोग जुटाउन हामीले सेतोपाटी डट कममा गरेको सार्वजनिक अपील बाहेक, हालसम्म, कुनैपनि व्यक्ति वा संस्थालाई आधिकारिता दिएका छैनौं। आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेहरुको निम्ति एक मात्र ढोका धुलिखेल अस्पतालको सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बैक खाता मार्फत मात्र हो। धुलिखेल अस्पताल सामुदायिक सेवाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्थापित संस्था हो। हामीलाई आर्थिक सहयोग रकम पठाउने ठेगाना हो:
Dhulikhel Hospital Community Development (KOSHIS)
Account number # 00502050-250481
Swiftcode : NIBLNPKT
Nepal Investment Bank, Banepa Branch
(नेपाल भित्रबाटै रकम पठाउन Swiftcode चाहिँदैन)
नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैकले साउन ११ गते अर्थात २७ जुलाई २०१५ सम्मको रेकर्ड अनुसार प्राप्त सहयोग रकम र दाताको नाम विवरण जारी गरेको छ। आम पाठकको सुविधाका लागि हामीले दाताको नाम नेपाली भाषामा पनि राखिदिएका छौ।
MRS PHULMATI B.K. फूलमति बिक , मानेखर्क
Small Help from Nirmal Thapa निर्मल थापा
BHIM PRASAD GHIMIRE भीम प्रसाद घिमिरे
VIJAY PANDEY विजय पाण्डे परिवार
DEB K KHADKA CASH DEPOSIT देवकुमार खडका, मानेखर्क
BANU DHUNGEL / KESHAB KOIRALA बानु ढुङेल/केशव कोइराला
SAMSHER BDR THEENG CASH DEPOSIT शम्शेर बहादुर थिङ
Contribution to Koshis - Gareypachi Sakinchha Sajjan Dahal सज्जन दाहाल
Koshis gare pachi huncha डी कार्की
15525711503814 बुद्द बराइली
MADAN THAPALIYA-CASH DEPOSIT बिनोद र मदन थपलिया
CEMT मार्फत ( SUSHMA OMATA ) CASH DEPOSIT सुषमा ओमाता, जापान
RAMESH SHARMA RAVIBHAWAN CASH DEPOSIT रमेश शर्मा
B/O:BIKASH VAIDYA विकाश बैध्य
BILL ID : 001SIAU15-00444
Would like to remain Anonymous नाम प्रकासित गर्न नचाहने
PREM NEUPANE प्रेम न्यौपाने
GOVINDA मार्फत इजरायलबाट जिनिता गुरुङ , रिचा गुरुङ र साथीहरुको सहयोगमा संकलित
M S P BUTWAL CASH DEPOSIT एम एस बुटबल
Support for Koshis prg led by DHS n Bijay kumar from Dhiraj धिरज
JIN HARSHA BAJRACHARYA KAMALPOKHARI CASH DEPOSIT जिनहर्ष बज्राचार्य
MANJU SHAKYA-CASH DEPOSIT मन्जु शाक्य
From Akur Chaulagain अंकुर चौलागाइ
RAJU RAM GURUNGCASH DEPOSIT राजु राम गुरुङ
BIBHA &UJJWAL SHRESTHA बिभा र उज्जवल श्रेष्ठ
AMRITAYA CASH DEPOSIT अमृत्या
SUDIP KHADKA / SRIJANA SHAH CASH DEPOSIT सुदीप र सृजना खडका
RAM BDR. TAMANG रामबहादुर तामाङ
Koshish lai sano sahayog कोशिशका लागी सानो सहयोग
PRADEEP BARAL CASH DEPOSIT प्रदीप बराल
BISHNU/ANJU GHIMIRE AUS बिष्णु र अन्जु घिमिरे , सिडनी अस्ट्रेलिया
OWCLG CHQ#1024766 FROM Mahalaxmi Finance Limited चन्दा भट्टाराइ मार्फत
OWCLG CHQ#1024775 FROM Mahalaxmi Finance Limited चन्दा भट्टराइ मार्फत
EBANKING TRF FRM INDRA KUMAR BAL ईन्द्र कुमार बल
TFR FROM CIVIL BANK B/O NIR KUMAR GURUNG निर कुमार गुरुङ
GOALNEPAL .COM SUPPORTERS गोल नेपाल डट कम का समर्थकहरु
OWCLG CHQ#20074 FROM NABIL BANK LTD
नाम प्रकासित गर्न नचाहने
OWCLG CHQ#236206 FROM NEPAL CREDIT AND COMMERCE BA नेपाल क्रेडिट ऐण्ड कमर्श बैङको चेक # 236206 बाट प्राप्त, दाताको नाम नखुलाइएको
OWCLG CHQ#236207 FROM NEPAL CREDIT AND COMMERCE BA नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङको चेक # 236207 बाट प्राप्त , दाताको नाम नखुलाइएको
B/O:AMAR KHADKA अमर खडका
CLG SANIMA CHQ#29284501 DEP BY .......नाम प्रकाशित गर्न नचाहने एक सज्जन
MAHESH RIMAL SYDNY AUS CASH DEPOSIT महेश रिमाल, सिडनी
PASHUPATI CASH DEPOSIT पशुपति
MANOJ ARYAL CASH DEPOSIT मनोज अर्याल
Lok Raj Bist, Mahendranagar-11 लोकराज बिष्ट, महेन्द्रनगर
WIM HULME UK (RAJ KUMAR KHADKA) NEPAL विम हुल्मे ( राजकुमार खडका ) बेलायतबाट
SABANCHAPAGAIN सबन चापागाइ
B/O:DINESH PARAJULI दिनेश पराजुली
KOSHISH... GAREPACHHI HUNCHHA कोशिश गरे पछि हुन्छ
SAGAR RAYAMAJHI 9849078111 CASH DEPOSIT सागर रायमाझी
BINOD BASNET SEOUL SOUTHKOREA CASH DEPOSIT बिनोद बस्नेत , कोरियाबाट
SHIVA PRAKASH CASH DEPOSIT शिवप्रकास र ज्योत्सना पौडेल , अमेरिकाबाट
PREM PRASAD GURAGAIN CASH DEPOSIT
प्रेम प्रसाद गुरागांइ , अमेरिकाबाट
OWCLG CHQ#11936129 FROM EVEREST BANK LTD सुषम रिसाल खतिवडा र परिवार
SUSHMA KHADKA COLORADO AMERICA CASH DEPOSIT सुषमा खडका , कोलोराडो अमेरिका
SAKETA NEUPANE WASHINGTON DC USA साकेता न्यौपाने , अमेरिका
SHASHI SHARMA FAMILY CASH DEPOSIT शशी शर्मा परिवार
SUNCITY अमेरिकाबाट नाम प्रकासित गर्न नचाहने CASH DEPOSIT
OWCLG CHQ#66089 FROM NEPAL BANGLADESH BANK LIMITED क्यालिफोर्निया अमेरिकाबाट नरेश प्रधान र पावका शर्मा प्रधान
ENVIRONMET MANAGEMENT & ANALYSIS CASH DEPOSIT इन्भायरोमेन्ट मेनेजमेन्ट एण्ड एनालिसेस
CHQ#1000211214 ACHUTAM BHANDARI अच्युतम भण्डारी
TRF FRM IME LTD. अमेरिका स्थित Sumi Eye brow Inc बाट जमुना पाण्डे र सुमित्रा पराजुलीको प्रयासबाट संकलित
SUNITA SHRESTHA UK सुनिता श्रेष्ठ, बेलायतबाट
Amrita Lamsal’s contribution deposited on her behalf by Kalpana . अमृता लम्साल
CEMT CASH DEPOSIT , दाताको नाम नखुलाइएको
RAJESHWOR BARAL CASH DEPOSIT राजेश्वर बराल
JAMUNACASH DEPOSIT जमुना
MANOHARI JAISNI मनोहरी जैसी
B/O JEETENDRA KC जितेन्द्र केसी
BILL ID : 001SIUS15-13906
B/O:STRICKER BAUMGARTNER MARTHA मार्था
MADAN मदन न्यौपाने CASH DEPOSIT
SACHIT & FRIENDS (THALI)-CASH DEPOSIT । काठमाण्डौ थलीका बेलायत बस्ने प्रमोद कुइकेल, मनिषा कुइकेल लगायतका साथीहरुको मुख्य योगदान । उगेन्द्र श्रेष्ठ, जगदिश खडका, रबिन कुइकेल , राजु सिङखडा , अमृत पौडेल,प्रमोद घिमिरे, उज्जवल घिमिरे , महेश पौडेल, यज्ञनाथ पराजुली , महेश्वर पराजुली र सुरज खडकाको पनि योगदान भनी सचितबाट जानकारी
SACHENA BARUWAL KARKI CASH DEPOSIT सचेना बरुवाल कार्की
RABIN BHANDARI / NEPAL REMIT CASH DEPOSIT जापान बाट रबिन भण्डारी, दिलिप राई , मुक्ति रोक्का , जसकुमार राई र बिष्णु कार्की .
OWCLG CHQ#69199 FROM GLOBAL IME BANK LIMITED ग्लोबल आइएमई बैङको चेक #69199 , दाताको नाम नखुलाइएको
SULOCHANA SHRESTHA सुलोचना श्रेष्ठ
Sanjit Sapkota CASH DEPOSIT . नान्चिङ चीनबाट संन्जित सापकोटा
ASHMA GAUTAM आश्मा गौतम र परिवार
BHOLI DEVI HAMAL C/O SANDESH 9851031738
भोली देवी हमाल c/o शन्देस
B/O NABEEN DULAL नबिन दुलाल
RAJAN CHAPAGAIN / C/O SALIKRAM CHAPAGAIN राजन चापागाई c/o शालीग्राम चापागाइ
BISHO SHRESTHA CASH DEPOSIT विश्व श्रेष्ठ
B/O:BUDDHA SHRESTHA बुद्द श्रेष्ठ
BASANTI UPRETY CASH DEPOSIT बसन्ती उप्रेती
BINOD MANI BHATTARAI,SOS CHILDREN VILLAGE,KAVRE बिनोदमणि भट्टराइ , काभ्रे
B/O:MANOJ KUMAR PATHAK मनोज कुमार पाठक
BILL ID : 001SIEU15-04826
BISHNU POUDEL MELBORNE बिष्णु पौडेल, मेलबोर्न
GOKUL BANSTOLA/CASH DEPOSIT गोकुल बास्तोला
JME CASH DEPOSIT दाताको नाम नखुलाइएको
KEWAL GURUNG केवल गुरुङ
TIRTHA GURUNG तीर्थ गुरुङ
RUDRA CASH DEPOSIT रुद्र ज्ञवाली
SASHIM GAUTAM ससिम गौतम
SHYAM PANDEY श्याम पाण्डे
ASMITA BUDHATHOKI अस्ट्रेलिया बस्ने अशोक बुढाथोकीले आफ्नी आमा सावित्री बुढाथोकीको नाममा काठमाण्डौ बस्ने भतिजी अस्मिता मार्फत जम्मा गराएको
00502050250481:Int.Pd:24-05-2015 to 16-07-2015
00502050250481:WTax Pd:24-05-2015 to 16-07-2015
GYAWALI GROUP-CASH DEPOSIT ज्ञवाली ग्रुप
B/O:GHARTI MAGAR CHAKRA BAHADUR चक्र बहादुर घर्ती मगर
DAMBAR BDR KATWAL & FRIENDS CADD EMIRATES DUBAI डम्बर बहादुर कटुवाल र साथीहरु , Cadd Emitates Computer Trading , दुबइ
Sano KOSHIS सानो कोशिश
B/O:SANJU SHARMA सन्जु शर्मा ,सिडनी । आफ्ना माता पिता सुभद्रा र डा भीष्मराज प्रसाईको नाममा
Raji and John Allen राजी र जोन एलेन
Uttam Karki उत्तम कार्की
चेक #10391 डा प्रकाशचन्द्र लोहनी
Total Rs 41, 77. 968.95 ( एकचालिस लाख सततर हजार नौ सय अड्सट्ठी रूपैया पन्चानब्बे पैसा)
स्थानीय प्रयासले पुनर्निर्मित टहराहरू
भूइँचालोले मानेखर्कका दुईचार अपवाद बाहेक सबैजसो घरलाई लडाएको थियो। तर त्यहाँका जनताले आपसी एकता र सहयोगको पुरानो परम्परालाई कायम राख्दै एक आपसमा मिलेर एक अर्काको निम्ति अस्थायी टहराहरू बनाएका छन्।
सामाजिक एकता भएको ठाउँमा काम गर्न सजिलो र उपलब्धि छिटो हुनेरहेछ। यो मेरो लागि ठूलो शिक्षा हो। मानेखर्कबाट म धेरै कुरा सिक्दै छु।
विनाशकारी भूइँचालोपछि सरकार वा कोही आउँला कि भन्ने आशमा मानेखर्कबासीले कुर्दा पनि कुरेनन्। आफैं आफ्नो भत्केको घरका ढुङा र स्लेट बटुल्ने र काठपात जस्तापाता सोझ्याउन काममा लागे। एक्का दुक्का सामाजिक संस्था त्यहाँ सहयोग गर्न पुगेपनि। मानेखर्क गाउँका दलित र सबैभन्दा गरिबहरुले चाहि फूलबारी गुम्बाका तेन्जिङ दोर्जे मार्फत उपलब्ध गराइएको अलि राम्रै खाले टेन्टको साहरा दिएँ। गाउँमा दुःख छ तर गाउँलेहरू त्यसविरूद्ध संघर्षरत पनि छन्।
अहिले गाउँमा खेतीको चटारो छ। खेतीका लागि पानी परेकामा मानिस खुसी छन्। तर, पानीले पीर पनि साथै निम्त्याएको छ। बर्खाको मौसममा अस्थायी टहराको बासले जन्माएको दु:ख आफ्नै ठाउँमा छ।
पानी नपरे पनि दुःख, परे पनि पीर!
‘यो बर्खा त जेनतेन धानिएला तर सधैभरी अस्थायी टहरोमा बसेर जीवन चल्दैन’, कान्छी तामाङले भनिन्। सामाजिक अगुवा शंकर लामाको मनोभावना पनि त्यस्तै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण यथासिघ्र निर्माण गर्न म प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यति समय बितिसक्दा पनि सो कार्य सम्पन्न नहुनू, पानीमा रूझेर बसेका जनताहरूमाथि अक्षम्य र अमानविय हेलचेक्रयाइँ हो।
‘तपाईहरूले मानेखर्कमा के के दिनु हुन्छ त?’ काठमाडौंतिरका केही खप्पिस जानिफिकारहरू बिस्तारै सानो स्वरमा सोध्छन् यदाकदा मलाई। सोध्ने बुझ्ने मनसायभन्दा पनि सुँघ्ने उद्धेश्यले गरिएका प्रश्नहरू।
हामी मानेखर्कमा केहि दिन मात्र गएका होइनौं, लिन पनि गएका हौं। सिकाउन मात्र पसेका होइनौं, सिक्न पनि पाइला चालेका हौं।
‘कोशिश’ अभियानलाई हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक योगदान गर्ने अमेरिका बस्ने एक साधारण मध्यम बर्गीय नेपाली शिव प्रकाशजीले प्रयोग गरेका शब्द दोहोर्‍याउन चाहन्छु ‘अरूका लागि बत्ति बालियो भने त्यो उज्यालोमा आफू पनि हिड्न सकिन्छ।’
सुरूमै लेखेँ, दोहराउन चाहन्छु -म कुनै ठूलो समाजसेवा भाव भएको मानिस होइन। मेरो आफ्नै कामको व्यस्तता धेरै छ। नियतिले डोराएकोले मात्र मानेखर्क पुगेको हुँ। मानेखर्क होस् वा कुनै पनि गाउँ, त्यसका आवश्यकता, योजना निर्माण र सञ्चालनमा ग्रामवासीको संग्लग्ता रहेमात्र उपलब्धि दिगो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाइ कुनै भ्रम छैन।
‘कोशिश, गरे पछि हुन्छ’ हाम्रो विश्वास हो भने ‘गाउँमा के गर्दा बेश होला?’ भनेर गाउँलेसँगै राय सल्लाह गर्नु हाम्रो कार्यपद्दति र शैली हो। यही कार्यशैलीले मात्र नतिजा दिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। डा.रामकण्ठले पनि पटक पटक मलाई यही बताउनुभएको छ।
गाउँ, गाउँलेनै बनाउँने हो। वर्षमा दुई चार पाँच पटक जाने हामीले होइन। सहयोग जरूर गर्न सकिन्छ, गरिने छ। तर वैचारिक र कार्यगत स्पष्टता जरूरी छ।
‘के गर्दा बेश होला ह?’
यो प्रश्न मैले मानेखर्कमा पटक पटक सोधेँ, धेरैलाई सोधे। अनेक कोणबाट सोधेँ। सबै भावनाहरुलाई एकै ठाउँ राख्दा उत्तर यस्तो बन्दो रहेछ–
‘बर्खापछि पुननिर्माणमा लाग्नुपर्छ। बासको ठेगान त हुनै पर्‍यो। सधैभरि टहरामा बस्ने कुरा भएन। सरकारले पनि प्याकेज दिने भनेको छ। तपाईहरुले पनि त्यसमा सकेजति सघाउनुहोस्। हामी हाम्रो आम्दानी बढाउन चाहन्छौं। हातमा पैसा परेपछि जीवन बाच्न सजिलो हुन्छ। आम्दानी बढाउँने शीप र उपायहरु सिक्न पाए हुन्थ्यो। कृषिमा नयाँ केहि गर्न पाए हुन्थ्यो। महिलालाई घरै बसी केहि ईलम गर्न सहुलियतमा ऋण पाए राम्रो। स्कुल भवन भत्केको छ। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण होस्। प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था होस्।
स्वास्थ सेवाको लागि यहाँ ओपीडी मात्र होइन, चार बेड भएको धुलिखेल अस्पतालको आउटरिच सेन्टरले ठूलो सेवा गरेको छ। यस्तो दुर्गम स्थानमा पनि देवकुमार खड्काजीले वर्षौदेखि सेवा गर्दै आएका छन्। हाल वर्ष दिनदेखि डाक्टर पासाङ लामा पनि यतै छन्। अनमि सिस्टर पनि छिन। बेलाबखतमा धुलिखेलका ठूला डाक्टर सा’बहरू पनि आउनु हुन्छ क्याम्प गर्न। मानेखर्कमा यो सेन्टर नहुने हो भने, यो भेगमा कोशौसम्म कोहि डाक्टर छैनन्।’
मानेखर्कस्थित धुलिखेल अस्पतालको आउटरिच सेन्टर
एक प्रसंगमा स्थानीय महिला अगुवा सार्की डोल्मा तामाङले स्पष्ट भनिन्, ‘विजय सर कसले दिएर आजसम्म कसलाई पुगेको छ र? आफै गरि खान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ईच्छा हो। त्यसका लागि सहुलियतमा महिलालाई ऋण भए राम्रो हुन्छ। हामी मेहनत गर्न तयार छौ। यहाँ नगदेबाली के के हुन सक्छन्, ज्ञान पाए हुन्थ्यो। हाम्रा उत्पादनको निम्ति बजार खोजी दिनुपर्‍यो सुरू सुरूमा। त्यति भएपछि बाँकी हामी आफैं गरिखाने थियौ।’
बर्खा लागेपछि मानेखर्क जाने बाटो बन्द हुन्छ। घन्टौं हिड्नुको बिकल्प रहँदैन। दुई साता अघि म पनि हिडेँ। साथमा थिए, नेपालका ख्यातिप्राप्त कृषीबिज्ञ मदन राई। मानेखर्कमा नयाँ संभावनाहरुको खोजी गरिदिन अनुरोध गर्दा सहर्ष तयार भए राई।
आफ्नै सुरतालमा हिड्ने ‘वन पिस’ हुन् मदन राई। नेपालका सरकारी, सहकारी, एनजिओ, आइएनजिओदेखि लिएर विश्व खाध्य संगठन (FAO) सम्मको जागिर अनुभव छ उनलाई। धेरैलाई थाह छैन होला ४० वर्षअघि पनि मुस्ताङमा स्याउ खेती राम्रो हुन्नथ्यो। आज त्यँहा स्याउ खेती जसरी फक्रेको छ-त्यसमा मदन राईको पनि योगदान छ। १४ वर्ष मुस्ताङमा बिताए उनले।
‘मलाइ सबथोक भन्नु तर ‘कृषि बिज्ञ’ नभन्नू। नेपालमा काम गरेका कयौ देशी बिदेशी कृषि बिज्ञहरू वास्तवमा गधा हुन्। किताबसँग टासिएका, तर माटो र प्रकृतिसँग नजोडिएका गधाहरू। म पनि धैरै काल गधै रहे। हामी गतिलो र स्पष्ट भएको भए देशको कृषिको यस्तो हालत हुने थिएन। मैले पनि बिज्ञको नाममा धेरै गल्तीहरु गरेँ। त्यसका निम्ति मैले नेपाली जनतासँग टेलिभिजन कार्यक्रम दिशानिर्देशमा केहि वर्षअघि सार्वजनिक माफी पनि मागे। आजको दिनमा म आफूलाई-अभ्यासरत किसान-भन्न मनपराउँछु।’
मदन राई र स्थानीय किसानसँग
मदन राईका आफ्ना अनुभवि र तिखा आँखाले मानेखर्क नियाले। ६६ वर्षको उमेरमा पनि उनको शरीर र दिमागको ताजगी रहरलाग्दो छ। उनले मानेखर्कमा कयौ सरल, गहिरा र कामलाग्ने सल्लाह सुझाव दिएका छन्। बर्खायामपछि तिनलाई व्यवहारमा ल्याउने तयारी हुँदैछ।
हामीलाई विश्वास छ-केहि फरक पर्ने छ, जरूर। हामी ठूला ठूला कुरा गर्न मानेखर्क गएका होइनौं। साना साना काम सघाउन मात्र हिँडेका हौं।
ससाना कुरा गर्दा, जस्तै, हामी खेत जोत्ने सानो ‘हाते पावर टिलर’ किन्ने छौ।
‘तीन थान जति खेत जोत्ने हाते मेसिन भए, सजिलो पनि हुने थियो, उत्पादन पनि बढ्ने थियो। गाउँमा खेत जोत्ने मान्छे नभएर खेतहरू बाँझै रहनथाले’ भन्ने आवाज धेरै सुनियो। त्यसपछि हामीले गाउँवासीहरू कै एउटा समूह बनायौं। बर्खापछि हामीले तीन वटा हाते पावर टिलर खरिद गर्ने योजना बनाएका छौ। त्यो चलाउने तालिम गाउँमै दिइने छ।
त्यसपछि पावर टिलर (खेत जोत्ने हाते मेशिन) चलाउने, ईन्धन व्यवस्थापन र मर्मत गर्ने सबै जिम्मा त्यही स्थानीय समूहको हुनेछ। त्यो मेशीनलाई न्युनतम भाडा तिरेर जो कोहिले प्रयोग गर्न पाउने छ। बाँकी जम्मा भएको रकम समूहको सम्पत्ति हुनेछ।
ससाना तर अर्थपूर्ण कामहरूको कुरा गर्दा, सौर्य उर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने मेरा एक मित्रले मानेखर्कको कच्ची बाटोमा सडक बत्ति (Solar Street Light) जडान गर्ने बचन दिएका छन्। सुनेर म दङ परेको छु। ‘सडक बत्ति’ कुनै नगर वा महानगरमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि!
हामी मानेखर्कमा सौर्य उर्जाले पानी तताएर बुढाबुढी र केटाकेटीका निम्ति जाडो महिनामा नुहाउने तातो पानी उपलब्ध हुने सार्वजनिक धारा/ स्नान गृह (Public bath house ) पनि बनाउँने छौ। जाडो महिनामा मानेखर्कमा पानी निकै चिसो हुन्छ। जब गाउँका वृद्धवृद्धा र केटाकेटी जाडोको मौसममा तातो पानीले नुहाउँलान्, उनीहरू कति खुसी होलान् है!
मलाइ विश्वास छ- हामीलाई गाउँका अग्रजहरूको आशिर्वाद लाग्नेछ। त्यही आशिर्वादको शक्तिले थप कामहरू फैलिदै जाने छन्।
धुलिखेल अस्पतालमा डाक्टर रामकण्ठ मकाजु र डा.राजेन्द्र कोजुसँग
मानेखर्कबाट फर्केपछि, मैले धुलिखेल अस्पतालमा डाक्टर रामकण्ठ मकाजु र डा.राजेन्द्र कोजुसँग विस्तारमा आफ्ना अनुभव साटेँ। डा.रामले मलाई अंग्रेजीमा सोध्नु भयो- ‘Vijay! Do you feel richer or poorer after donating your money and time?’ ( विजय! मानेखर्कका निम्ति पैसा र समय दिएपछि तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति बढेको अनुभव हुँदैछ कि घटेको?’
उत्तर दिन मलाई क्षणभर पनि सोच्नु परेन।
‘Richer’ (मेरो सम्पत्ति बढेको महसुस गर्दैछु डा’साब)
‘This is justabeginning Vijay’(यो त सुरूआत मात्र हो)
‘अनि विजयजी, तपाईँलाई एउटा खुसीको न्युज भन्छु’
‘कस्तो न्युज डा’साब?’
‘धुलिखेल अस्पतालले मानेखर्क आउट रिच सेन्टरमा एक्स-रे मेशिन र अल्ट्रा साउण्डको व्यवस्था मिलाउने छ’
‘मानेखर्कमा एक्स रे मेशिन र अल्ट्रा साउण्ड डाक्टर साब!! वाओ !!’ म खुसीले कराए।
‘वाओ’ भनेर खुसीले कराउँदा मैले मानेखर्क मात्र होइन भोताङलगायत थाङपाल्कोट आदि विकट भेगका गरिब जनताको मुहार सम्झेँ। डा.रामकण्ठको यो ‘गुड न्युज’ ले त्यस भेगको जनजीवनमा कति धेरै महत्व राख्छ भन्ने अनुमान म सजिलै गर्न सक्थे।
एक्सर रे र अल्ट्रा साउण्ड मेशिनले, त्यस विकट भेगका हजारौ मानिसको जीवनमा, एउटा दुर्लभ अवतार प्राप्तिको अर्थ राख्छ। यो कुरा बुझ्न जीवनलाई उनीहरूकै आँखाबाट हेर्नपर्छ, उनीहरुकै भोगाइबाट बाच्नुपर्छ। अनि मात्र अर्थ खुल्छ। केहि दिन अघि, मानेखर्कबाट म पनि ९ घन्टा हिँडेरै मेलम्ची पुगेको थिए। त्यसैले त डा.रामको कुरा सुन्ने बित्तिकै ‘वाओ’ भनेर चिच्चाएँ।
सोच्दै छु, अब नजाने कति पटक नियतिले त्यता लिएर जाने हो! जे होस, खुसी छु। सबै सहयोगी हातहरू र शुभेच्छुलाई ‘कोशिश’ टिमको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
मायाँ साँची राखे! माया नमारे है!
पुनश्च: मलाई सम्पर्क गर्ने सबैभन्दा सजिलो सम्पर्क माध्यम इमेल नै हो।
प्रकाशित मिति: 2015-07-28 13:42:14